Had iyo jeer diiradda la saaro: Tayada, Kalsoonida, Adeegga.
Xidho Kubbadda Koleyga
Dhididka & Hoodies
Dharka Ilmaha & Dhallaanka
Ilaha Caalamiga ah
Dharka Jasiiradda Guga
Xulasho wanaagsan xulalkaaga jaakadaha buufinta guga - nalka, naylka ka tarjumaya midabka midabka leh Waxay kaa dhigi doontaa inaad ka dhex muuqato dadka badan.
Immisa nooc oo dhar caadi ah ayaa jira?
Dharka firaaqada guud ahaan waxaa loo qaybin karaa xilliyada firaaqada ah, raaxeysiga isboortiga, raaxada jaceylka, firaaqada ganacsiga iyo firaaqada miyiga. 1. Dharka caadiga ah ee Avant garde: Dharka caadiga ah ee Avant-garde, oo sidoo kale loo yaqaan dharka caadiga ah ee casriga ah, ayaa ah midka guud ee caanka ah ...
Sidee loo doortaa dharka dharka banaanka?
Waxaa jira noocyo badan oo dhar ah oo loogu talagalay dharka dibedda. Keebaa kugu habboon adiga? Xulista dharka banaanka, waxaa jira lix shaqooyin muhiim ah. Aynu jaleecno lixda astaamood ee ah: Hufnaanta hawada Heerka hawo halkii ...
Waxaan ku guuleysanay tayo iyo tayo waxaana ku guuleysanay aqoonsiga warshadaha. Ganacsiga dhoofinta, waxaan u baahanahay inaan si adag u xakameyno tayada. Waxaan rajeyneynaa inaad alaab tayo sare leh u keento isticmaaleyaasha adduunka oo idil. Xakamaynta tayada / taageerada farsamada ...
Xulo Xulistaada 2020 Fall
Dayrta ayaa horayba u soo socota, waa inaad qorshaysataa dharkaaga dayrta ee debedda ah. Waxaa jira noocyo ballaaran oo ay tahay inaad tixgeliso: lakabyada salka, boodboodayaasha, jaakad roob, dabaylaha, jaakadaha dhogorta iwm.
by idaacadda Subaxnimo 20-07-08
Qaab sameynta Awoodda OEM / ODM: Waxaan soo saari karnaa dharka u gaarka ah sida naqshadeyntaada / shaybaarkaaga ama sawir ama fikrad adiga kaa timid. Shaqaalaheena khibrad sameynta ee khibrada leh ayaa ku siinaya xalal adiga. Shaqaalaheena xirfada leh iyo kooxda QC wi ...
QC / Taageerada Farsamada: Kooxdayada QC waxay kormeer adag iyo kormeer ka sameysaa alaabta ceyriinka ah ilaa alaabada badan. - Dharka waxaa lagu dalban doonaa hadba baahida macaamiisha, sida miisaanka dharka, halabuurka, koodhka midabka, xawliga midabka IWM.
Macluumaadka Ganacsiga Waxaan udiyaarineynaa bixinta adeeg dhameystiran iyo alaab tayo sare leh. Waxaan ku saleysanahay qanacsanaanta macaamilka iyo baahida suuqa. Dhaqankeena ganacsi wuxuu diirada saarayaa: tayada, adeega iyo daacadnimada. Kaliya ma iibineyno alaabtayada ...
Adigu gacantaada ayaan ku jirnaa maalin kasta, waqti kasta…
Xor u ahaaw inaad email noo soo dirto ama aad na soo wacdid
Waxaan u adeegnaa naadiyada isboortiga, ururada, kulleejooyinka, dukaamada, xarumaha wax laga iibsado, urur dowladeed, shirkad iyo shaqsiyaad iwm.
Fulinta amarrada OEM & ODM ee dhammaan noocyada noocyada ah. Kaliya ma bixinayno adeegga nashqadeynta & wax soo saarka laakiin sidoo kale adeegga la-talinta ganacsiga.